Global Voices teny Malagasy » Olona an-tapitrisany ao Assam avaratra atsinanan’i India atahorana ho very zom-pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Septambra 2019 8:34 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Araka ny filazan'ny governemanta Assam, natao ny fanavaozana ny firaketana ireo olom-pirenena 33 tapitrisa ao Assam mba hamantarana sy hanesorana  ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna avy any Bangladesh mpifanolo-bodirindrina. Satria mihamitombo ny fihenjanana sy ny fihetseham-po, miharatsy sahady ny vokatr'izany fihetsika izany raha nitsambikina tanaty lava-drano  ny vehivavy iray 60 taona rehefa nahare tsaho fa voahilika tamin'ny lisitra izy.
Tamin'ny volana jona lasa teo, navoaka  ny endrika voalohan'ny rejistra, izay nanaisotra mpangataka 4,1 tapitrisa. Niteraka tsikera avy ao amin'ny antoko manokan'ny fanjakana ny famoahana farany ary niteraka tahotra ho an'ireo mponina voahilika ao Assam.
Ny Rejistra Nasionalin'ny Olom-pirenena (NRC ) dia rejistry ny governemanta misy ny anarana sy ny vaovao mifandraika amin'ny mombamomba ny olom-pirenena Indiana rehetra. Natao ny rejistra taorian'ny fanisam-bahoaka 1951 tany India ary, vao haingana no nasiam-panavaozana izany. Ny fanjakana avaratra-atsinanana Assam  no fanjakana voalohany any India nanavao ny NRC.
Raha te-hisoratra ho an'ny NRC, dia tsy maintsy nampiseho antontan-taratasy porofo ny olona ao Assam fa teraka tao Assam talohan'ny 25 martsa 1971, fe-potoana ofisialy, izy ireo na ny razambeny. Nilaza ny mpanao politika fa amin'ny alalan'ny rejistry ny olom-pirenena no vahaolana amin'ny fifandonana ara-poko sy ara-pinoana satria manana ny roatokon'ny olompirenena no Bengalis  izay maro Miozolomana ihany koa.
Miha-lalina ny fihetseham-po tsy tia Bengali ao amin'ny fanjakan'i Assam. Taorian'ny fivakisan'i India  tamin'ny taona 1947 noho ny fivavahana, nisy ny fifindra-monina faobe nitranga satria nifindra monina tany amin'ireo fanjakana Indianina mifanakaiky, toa an'i Bengal Atsinanana sy Assam, ankoatra ny hafa ny Bengali  Haindò, raha nifindra tany Bangladesh kosa ny Silamo avy tamin'ireo toerana ireo. Na izany aza, niteraka fihenjanana teo amin'ireo mponina teo an-toerana sy ny vazimba teratany Assamey izany fifindra-monina izany ka nahatonga ny fananganana hetsika anti-Bengali tahaka ny Bongal Kheda  (roahy ny Bengali).
Nohamafisina tao Assam  tamin'ny taona 1970 taorian'ny ady fanafahana an'i Bangladesh  izay nahitana firohotry ny mpitsoa-ponenana  hafa avy any Bangladesh ny hetsika fanoherana ny mpifindra-monina. Tamin'ny taona 1980, nandefa memorandum voalohany mitaky ny fanavaozana ny NRC mba handroahana ny “vahiny” ny Sendikan'ny Mpianatra Assam Rehetra (AASU). Tamin'ny taona 1983, maherin'ny 2000 ireo Bengaly maty novonoina  tany Assam tamin'ny vono olona ara-poko taorian'ny fanapahan-kevitry ny praiminisitra Indiana tamin'izany fotoana izany, Indira Gandhi, hanome zo hifidy ho an'ny mpifindra-monina avy any Bangladesh. Tsy nisy voampanga na dia ny iray aza tamin'ireo nahavanon-doza. Tao India, matetika nampiasaina toy ny fanevatevana ny marika «Bangladeshita», ary matetika noheverina ho Silamo sy tsy ara-dalàna ireo mpifindra monina Bangladeshita.
Nanomboka tamin'ny taona 2013 ny fizotran'ny fanavaozana ny NRC ao Assam rehefa nanome baiko  noho ny fangatahana nataon'ny ONG iray antsoina hoe Assam Public Works ny Fitsarana Tampony any India. Satria mandroso amin'ny fanavaozana ny rejistra ny governemanta Bharatiya Janata Party  (BJP) elatra ankavanana, mihevitra ireo Bengaly Miozolomana marobe ao Assam fa izy ireo no kendrena voalohany amin'ny fanilihana.
Betsaka ny fiampangana sy tsikera manohitra an'ity lisitra NRC farany ity, anisan'izany tsikera izany ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny anarana voafidy – nisy ny sasany tao amin'ny fianakaviana iray nampidirina tanaty lisitra  raha tsy tafiditra kosa ny hafa. Na ny BJP eo amin'ny fitondrana aza dia nitsikera ny NRC farany .
Matoandahatsoratra tao amin'ny Indian Express nilaza hoe :
Hahazo 120 andro hampiakarana sy hanaporofoana ny maha-olompirenena azy ao amin'ireo vondron-paritra ara-pitsarana antsoina hoe tribonalin'ny vahiny  ireo izay voahilika tao anatin'ny NRC, efa miasa ny sasany amin'ireo tribonaly ireo. Ny tribonaly no hanapa-kevitra momba ireo raharaha ireo ao anatin'ny enim-bolana manomboka amin'ny fotoana nampakarana ny raharaha. Araka ny tatitra, tribonaly hatramin'ny 400  no andrasana hamaha ny olana amin'ny lisitra.
Alaivo sary an-tsaina hoe mampilahatra mitsangana ireo Indiana 1,3 miliara mba hamantarana fa Miozolomana Bangladeshy ireo lakhs vitsivitsy [manondro ny 100.000 ny lakh ]. Tsy hamantatra ireo Pakistaney tsy ara-dalàna sns any India ny NRC fa mba hamonoana, indrindra ny Bengali Haindò any Pakistan Atsinanana, izay nitsoaka hatramin'ny fizarazaran'i Bengal.
Notaterina fa tamin'ireo olona 1,9 tapitrisa izay tsy voatanisa tao anaty lisitra, 1,3 tapitrisa no Haindoa izay Bangladeshita Haindò ny 1,1 tapitrisa. Nampanantena  ny governemanta BJP fa hanome fialofana ho an'ireo Haindò enjehina manerana izao tontolo izao. Ka ho hita eo ny fomba handraisan'izy ireo ny vokatry ny lisitra aorian'ny fizotran'ny fitsarana.
Araka ny tatitra,  rehefa lany  ny vahaolana rehetra araka ny lalàna, hogadraina ao amin'ny toby fitananana ireo mpifidra-monina lazaina fa “tsy ara-dalàna” mandra-pandroaka azy ireo.
Matoky  ny Minisitry ny Fitantanam-bola ao Assam, Himanta Biswa Sarma fa hamerina ireo olona ireo i Bangladesh “ny naman'i India”.
Na izany aza, naneho hevitra mikasika ny vaovao ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Bangladeshita, AK Abdul Momen tamin'ny filazany fa olana anatiny ao India ny NRC. Tsy mieritreritra izy  fa avy any Bangladesh ireo izay voahilika tao anaty lisitra:
Manampy ny olona ao anaty fahoriana ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Citizens for Justice and Peace (CJP)  amin'ny alàlan'ny fanokafana  laharana an-tariby fanampiana maimaim-poana amin'ny amin'ny fiteny efatra mba hanomezana vaovao marina momba ny fizotran-draharaha.
Nanampy tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra i Vishal .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/12/143038/
 mety hiharan'ny : https://www.aljazeera.com/news/2019/09/praying-assam-residents-anxious-nrc-omission-190902110355316.html
 hamantarana sy hanesorana: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/national-register-of-citizens-in-assam-issue-of-illegal-foreigners-continues-to-be-a-major-political-one/articleshow/47657561.cms
 nitsambikina tanaty lava-drano: https://www.indiatoday.in/india/story/assam-nrc-final-list-woman-dies-after-jumping-into-well-hearing-rumours-of-being-excluded-1593897-2019-08-31
 fivakisan'i India: https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_India
 Nohamafisina tao Assam: https://gulfnews.com/world/asia/india/assam-nrc-timeline-through-the-years-1.66124831
 ady fanafahana an'i Bangladesh: https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War
 firohotry ny mpitsoa-ponenana: https://en.wikipedia.org/wiki/East_Bengali_refugees
 maty novonoina: https://en.wikipedia.org/wiki/Nellie_massacre
 nampiasaina toy ny fanevatevana : https://www.restlessbeings.org/articles/assam-india-s-ethnic-cleansing
 nanome baiko: https://indianexpress.com/article/north-east-india/assam/how-supreme-court-drove-the-final-assam-nrc-exercise-5955098/
 nampidirina tanaty lisitra: https://scroll.in/article/935823/in-assam-many-women-children-fail-to-make-nrc-even-as-their-family-members-are-counted-as-citizens
 NRC farany: https://scroll.in/latest/935780/this-nrc-wont-help-get-rid-of-foreigners-says-assam-minister-himanta-biswa-sarma
 Indian Express nilaza hoe: https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/nrc-final-list-released-assam-illegal-migrants-5957218/
 tribonalin'ny vahiny: https://www.indiatoday.in/india/story/assam-nrc-foreigners-tribunals-1594975-2019-09-03
 tribonaly hatramin'ny 400: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/nrc-400-foreigners-tribunals-to-deal-with-cases-of-excluded-people/articleshow/70919445.cms
 Notaterina : https://www.hindustantimes.com/india-news/two-thirds-of-bengalis-excluded-from-assam-nrc-are-hindus-mamata-banerjee/story-aS8P2upLYmOL32VCM0pBDN.html
 Tsy mieritreritra izy: https://www.thedailystar.net/frontpage/assam-nrc-no-bangladeshis-among-them-1793731